Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Hong Kong » Tsidiho ny Hong Kong mba harovan'ny Dancing Jellyfish
Travel Travel • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Amin'ny maha-toeram-pitsangatsanganana an-dranomasina voalohany an'i Hong Kong ny tanàna, ny Cube O Discovery Park dia tsy vitan'ny hoe manolotra ny tontolo anaty rano sy ny fiainana an-dranomasina amin'ny fomba vaovao fotsiny, fa mandehandeha tsara koa ny ranomasina midadasika mankany amin'ny habakabaka toratelo izay mampifanakaiky ny ranomasina sy mampifandray. mpitsidika ny natiora amin'ny fomba vaovao sy mampiala voly.
Mandrakotra faritra iray mihoatra ny 10,000 metatra, ny Cube O Discovery Park dia hanasongadinana fampisehoana fiainana an-dranomasina tena izy ary lalao haino aman-jery fifandraisana mahafinaritra, miaraka amin'ireo fialamboly, fanabeazana ary fotoana fisakafoanana isan-karazany.
Mety amin'ny fitsidihan'ny mpianakavy sy sary an'ny haino aman-jery sosialy, i Cube O dia miorina amin'ny tsenambarotra vaovao marika Plaza 88 ao Tsuen Wan ary io no toerana iainana an-dranomasina voalohany any Hong Kong ao afovoan-tanàna.
Cube O no tetik'asa voalohany any Hong Kong avy amin'ny Cube Oceanarium - marika aquarium malaza eran-tany - ary vokatry ny fiaraha-miasa nahomby teo amin'ny mpanao mari-trano aquarium ambony, ekipa mpanao asa-tanana akondro fiompiana aquarium, matihanina mpiaro ny tontolo iainana ary consultant teknika izay nahazo loka roa tsara indrindra tamin'ny Visual Visual Effects tao amin'ny Hong Kong Film Awards.
Rehefa mitsidika Hong Kong indray aorian'ny fisokafana indray dia tokony ho ao anaty lisitry ny siny i Cube O
Ny hevitra ao ambadiky ny Cube O dia ny hamoronana traikefa an-dranomasina tsy manam-paharoa manasongadina ny tontolo anaty rano sy ny fiainana an-dranomasina tena izy, ampiarahana amin'ny effets multimedia mifanerasera, hampiroborobo ny hafatra fiarovana ny ranomasina
Traikefa an-dranomasina ho an'ny fianakaviana rehetra
Mizara ho faritra maromaro misy temotra maromaro ny Cube O miaraka amina zavatra mahasarika isan-karazany ao anatin'izany ny vinavinan'ny akrilika voalohany an'ny Hong Kong. Io dia mampifangaro ny fomba fijerin'ny fiainana an-dranomasina tena izy miaraka amin'ny hazavana sy aloka vokariny. Ohatra, ny jellyfish dia aseho amin'ny kaleidoscope misy loko, raha ny Virtual Reality (VR) kosa dia mitondra mpitsidika amin'ny dia lalina any amin'ny ranomasina lalina.
Misy ihany koa ny efitrano fampianarana jellyfish Mixed Reality (MR), trano filalaovana ho an'ny ankizy ary toeram-pisakafoana. Ireto traikefa nahafinaritra ireto dia manolotra tontolo andro iankinan'ny fianakaviana sahaza, ary toerana mety ho an'ny tanora ao amin'ny Instagram.
Mamelatra tanety mahagaga
Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fiainana an-dranomasina tena izy miaraka amin'ny hazavana ara-javakanto sy ny alokaloka izay manova ny jellyfish tsotra ho fampisehoana bubble maro loko, manantena i Cube O fa manaitra ny olona amin'ny halehiben'ny ranomasina. Ny jellyfish mandihy dia toy ny hoe manao baleta anaty ranomasina izy ireo ary manararaotra manao sary miavaka ho an'ny mpitsidika.
Ny haitao haino aman-jery fifandraisana dia ahafahan'ny mpitsidika mandinika ny fiainana an-dranomasina akaiky ihany koa ary hianatra bebe kokoa momba ny natiora, fiarovana ny tontolo iainana ary ny fomba fiaina maharitra. Ny vokany mahafinaritra hita maso dia hamorona ny fahatsapana fa nafindra tany amin'ny tany amoron-dranomasina feno fomba fijery mahatalanjona.
Kaleidoskopin'ny habaka nofinofy tsy manam-petra
Ny kaleidoscope jellyfish dia manambatra an-tsokosoko ny sarin'ny jellyfish tena izy, miaraka amin'ny aloky ny aloky ny fitaratra, ary ny jiro miloko dia taratry ny aloky ny jellyfish tsy hita isa amin'ny lafiny rehetra. Izy io dia mamorona habaka miafina tsy manam-petra izay hahatsapan'ny mpitsidika fa nilentika tanteraka izy ireo.
Ny andrim-panjakana jellyfish
Aorian'izay, ny mpitsidika dia afaka mitsidika ny andrim-pikarohana jellyfish ary mianatra ny fivoaran'ny jellyfish manomboka amin'ny zazakely ka hatramin'ny olon-dehibe ary hahalala bebe kokoa momba ny ekolojia jellyfish sy ny toetran'ny karazana jellyfish isan-karazany. Ankoatry ny fijerena sakafo jellyfish, ireo mpitsidika dia avela hifandray amin'izy ireo ihany koa amin'ny halavirana aotra ary avy eo manatona ny ranomasina.
Ireo lalao haino aman-jery fifandraisana dia hanatsara ny traikefa ankapobeny, satria ny mpitsidika dia afaka "manjary" trondro kely, milomano eo ambanin'ny fiarovan'ny jellyfish mandritra ny fitsangantsanganana amoron-dranomasina. Ilay "trondro kely" dia tsy maintsy miafina ao ambanin'ny jellyfish rehefa mitandrina ny mety ho tratran'ny tentacles na ny fanafihan'ny mpihaza mandry eo akaiky eo.
Ao amin'ny efitranon'ny jellyfish MR, ny mpitsidika dia mety ho tonga "mpiambina ny ranomasina" ary manavotra sokatra maitso mihantona, izay mitaky fikarakarana am-pitandremana sy ezaka be mba hanampiana ilay sokatra hiverina sy hilomano any an-dranomasina.
Ny hetsika famonjena dia manaraka ny fomba fanavotana sokatra tena izy. Ireo mpitsidika mandray anjara dia afaka hianatra momba ny asan'ireo mpiaro ny tontolo iainana matihanina, mieritreritra ny vokatry ny zanak'olombelona amin'ny ranomasina, ary mahazo fahatsapana iraka manoloana ny fiarovana ny ranomasina.
Fianakaviana miorina amin'ny ranomasina teatra ary fisakafoana kintana dimy
Ny Playhouse an'ny ankizy dia manasongadina ny kianja filalaovana an-dranomasina voalohany any Hong Kong ahafahan'ny ankizy mahazo fahalalana an-dranomasina rehefa miala voly amin'ny fifehezana ireo olana ara-batana.
Ny rindrin'ny Playhouse dia nolokoina loko ho an'ny ankizy mba hamoronana tontolo madio sy salama, mba hahafahan'ny ray aman-dreny misakafo amin'ny sakafo masaka eo akaiky eo miaraka am-piadanan-tsaina.
Nanasa an'i Chef Head sy ny ekipany avy ao amin'ny hotely kintana dimy eo an-toerana ny valan-javaboary mba hanomana safidy sakafo matsiro. Ho fanampin'izany, Corner Cone, marika gilasy malaza aziatika iray, dia nanomana karazan-gilasy misy lohahevitra miompana amin'ny ranomasina indrindra ho an'ny Cube O. Ny crème glasy misy endrika mampiavaka azy dia manome fotoana mahafinaritra indrindra amin'ny haino aman-jery sosialy sary.
Cube O dia mikendry ny hanome aingam-panahy olona maro kokoa hanaja sy hiaro ny mponina amin'ny ranomasina ary hiditra amin'ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina, amin'ny alàlan'ny fankafizana sy fiderana fomba fijery tsara momba ny fiainana an-dranomasina, fandinihana ny mampiavaka azy ireo, ary fidirana an-tsaina amin'ny tontolo anaty rano amin'ny alàlan'ny fifandraisana maro samihafa amin'ny haino aman-jery. lalao.
Cube O dia natao ho toerana fialamboly, fialan-tsasatra ary fanabeazana ho an'ny olona sy ny fianakaviana, ary koa ireo vondrona any an-tsekoly izay afaka mahita ny fahasamihafan'ny fiainana any an-dranomasina amin'ny alàlan'ny adim-pifandraisana lalina.
n 2021, voatanisa ho 5 izy ioth Aquarium tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny tranonkala World Cities Ranking ary laharana 16th amin'ny fisafidianana aquariums 50 tsara indrindra avy amin'ny tranokala Tour Scanner.